200 Chinzvimbo Zvinhu muGoogle Algorithm | Martech Zone
200 Chinzvimbo Zvinhu muGoogle Algorithm
Chipiri, June 4, 2013 Douglas Karr
Zvakanaka, izvi hazvisi nyore feat asi kudos ku Backlinko uye SingleGrain yekuisa pamwechete iyi infographic yakanangana nekuparadzanisa chinzvimbo cheGoogle algorithm. Iyo infographic inofamba kuburikidza nehutongi hwezvinhu, peji peji zvinhu, saiti-chikamu zvinhu, backlink zvinhu, mushandisi kudyidzana, zvinowedzerwa zviratidzo uye zvemagariro zviratidzo. Sezvo ivo vasiri kushandisa iyo uremu kune chimwe nechimwe chinhu,
Ini handisi kuzo nitpick iyo rondedzero… ini handitende zvese zvinokanganisa chinhanho asi izvo zvisati zvave kugona kukanganisa yako yekutsvaga injini mashandiro nekuwedzera tinya-kuburikidza chiyero. Chero nzira - iri rakakura rakazara runyorwa rwekuti iwe uongorore uye funga nezvako paunenge uchigadzirisa zvemukati.
Jun 4, 2013 pa 10: 18 PM
Yakanyanya kurongeka. Zvinounza kujekesa kwakawanda nei SEO plugins ine mazhinji epamusoro akabatanidzwa mavari. Semuenzaniso, SEO Presser. Ndatenda neizvi "zvese munzvimbo imwechete" mamiriro ezvinhu.
Jun 4, 2013 pa 11: 17 PM
Chinyorwa chinonakidza kwazvo! Ndinotenda nekuedza kunoshamisa
Jun 6, 2013 na7:50 AM
Chishandiso chikuru Doug! Chichava chimwe chinhu chandinobhukimaki! Pasi pechikamu chesaiti zvinhu, iyo yakapetwa yemukati snippet ine "duplicate zvemukati". 🙂 Ungada kuzvigadzirisa.
Jun 13, 2013 na7:17 AM
Ndatenda nekuda kweiyi infographic ine ruzivo.
Chirevo chimwe (padivi pane zvakatotumirwa naJacquelyn): ungangoda kushandura snippet pasi pe "Nguva paSaiti" zvakare :).
Sep 6, 2013 pa 1: 10 AM
Yakanaka infographic mufananidzo. Kana zvichibvira, tumidza webhusaiti yako uye URL yayo uchishandisa keyword. Unofanira
shandisa zvakare mumusoro, tsananguro, uye meta tags yewebhusaiti yako.
Vamwe vanoti mazuvano Google haichatarise meta tags
tsvaga mhinduro ranking.
Jul 27, 2015 pa 6: 26 AM
Jul 27, 2015 na12:46 PM
Gumiguru 10, 2015 pa 11:48 AM
Wow ini ndichangowana chinyorwa ichi paGoogle uye ndinotenda zvikuru Kushambadzira Tech Blog kune yakakura kudaro infograph iyo iri nyore kutarisira.